return to Work | Little Moments Count Employer Toolkit
Siinta hooyooyinka ikhtiyaaro dabacsan oo ay ku soo laabtaan shaqada, sida shaqada teleefoonka, shaqada PT, fasaxa waalidnimo ee la dheereeyey, iyo bixinta daryeelka ilmaha ee goobta ama goobta u dhow.
daraasad xaaladeed: Blue Cross
Blue Shield ee Minnesota
Caawinta shaqaalaha inay ku soo noqdaan shaqada fasaxa waalidka ka dib
Barashada sida loo maareeyo waalidnimada shaqeeya bilaha hore iyo sanadaha nolosha ilmaha waxay noqon kartaa mid adag. Blue Cross Blue Shield ee Minnesota waxay doonaysaa shaqaalaheedu inay helaan taageero xoog leh labadaba sababtoo ah waxay daneeyaan shaqaalahooda, laakiin sidoo kale waxay kor u qaadaan sii haynta iyo qanacsanaanta.
"Marka waalidka cusub uu ku soo laabanayo shaqada, waxaan bixinaa dabacsanaan weyn jadwalkooda," ayuu yiri maamulaha faa'iidooyinka Heidi Kent-Mack. "Waxaan ku dhiirigelinaynaa maamulayaasha inay u fududeeyaan shaqaalaha inay dib ugu soo laabtaan oo ay u oggolaadaan inay soo noqdaan si kasta oo ay ugu raaxaystaan."
Marka loo eego Kent-Mack, qayb muhiim ah oo ka mid ah maaraynta habka ku noqoshada shaqada waa liis hubineed oo dhamaystiran. Marka ay asxaabtu isu diyaarinayaan fasaxa, waxay la kulmaan xubin ka tirsan kooxda HR si ay ugu dhex maraan habka abuurista liis hubin oo ay ku jiraan wax walba laga bilaabo wakhti-ilaalin ilaa faa'iidooyinka taageerada dheeraadka ah. Liiska hubinta waxa uu dadka xasuusinayaa faa'iidooyinka la heli karo ee laga yaabo in aanay khusayn markii ay bilaabeen. (Fiiri "Ilaha" hoos.)
Qaar ka mid ah faa'iidooyinkan ama agabkan waxaa ka mid ah:
Xubinnimada Premium Care.com: Dhammaan asxaabta waxay geli karaan Care.com, haddii ay daryeelayaan ilmo ama waalid da' ah. Care.com sidoo kale waxay leedahay khabiiro ku takhasusay taageerada daryeelka ilmaha si ay uga caawiyaan dadka inay helaan xannaano carruureed oo buuxinaysa baahidooda.
Iskaashatada Soo Noqoshada Maskaxda leh: Blue Cross waxa ay bixisa Barnaamijyada Soo celinta Maskaxda ee khadka tooska ah lacag la'aana shaqaalaha xiisaynaya. Barnaamijyadu waxay diiradda saaraan abuurista maskax maskaxeed oo ku soo laabata shaqada, maaraynta saadka, kobcinta xirfadaha hogaaminta waalid cusub iyo dhisida bulshooyinka waalidiinta kale ee shaqeeya. Waxaa jira barnaamijyo loogu talagalay hooyooyinka, aabbayaasha, waalidiinta carruurta leh baahiyaha gaarka ah iyo kuwo kale.
Kooxda Kheyraadka ee Xiriiriyaha Daryeel bixiye: Kooxdu waxay abuurtaa shabakad taageero shaqaalaha waxayna la wadaagtaa welwelka iyo talooyinka Kent-Mack. Intii lagu guda jiray COVID, kooxdu waxay heshay dardar waxayna muhiim u ahayd inay aqoonsato taageero dheeraad ah, oo ay ku jirto waqti badan oo fasax ah. Maanta, Blue Cross waxay haysataa lix toddobaad oo fasax umusha ah oo mushahar ah iyo laba toddobaad oo fasaxa aabbanimada ah, oo lagu daboolay 100 boqolkiiba mushaharka lammaanaha.
Shirkad caymis caafimaad ahaan, Blue Cross waxay garanaysaa sida ay muhiimka u yihiin sanadaha hore waxayna siisaa barnaamijyo isbedel u sameeya waalidiinta iyo carruurta yaryar.
Goobta: Eagan, Min.
Tusaalaha siyaasaddani waxa uu diyaar u yahay in lagu waafajiyo baahiyaha shirkaddaada waana in loo tixgeliyo barta bilawga ah ee dejinta siyaasadahaaga shaqo.
Sida loo-shaqeeyayaashu u qaabayn karaan soo laabashada fasaxa umusha si ay u taageeraan hooyooyinka shaqeeya | Faa'iidooyinkaPRO